နှစ်ပေါင်းများစွာ နံနက်အာရုံဦးအဖွဲ့ ဧမာနွေလအသင်းတော် ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် မနက်တိုင်း ပူဇော်ဆပ်ကပ် ချီးမွမ်း ဆုတောင်းခြင်းပါ။
ဒီနေ့မနက်တော့ ဧမာနွေလအသင်းတော် . .နေ့စဉ် မနက် ၆:၃၀ ဝတ်ပြုကိုးကွယ် ဆုတောင်းခြင်း ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း ပွဲတော်မင်္ဂလာ များကို ယုံကြည်သူ မိတ်ဆွေများနဲ့ အချိန်ပေးပါတယ်။
မြန်မာပြည် ဆရာတော်များ အသင်းတော်များ နိုင်အကြီးကဲ အုပ်ချုပ်သူမင်းများ . . ငြိမ်းချမ်းရေး ရခိုင် ကချင် ကရင် ရှမ်း ပြည်နယ်များ. စစ်ပွဲများရပ်စဲဖို့ ဧမာနွေလအာရုံဦး မနက်တိုင်း အဆက်မပြက် ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ အလားတူ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး အာရုံဦး ညဝတ်ပြုခြင်းများ နေ့စဉ် အဆက်မပြက် ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။ ဘုရားသခင် မြန်မာလူမျိုးများကို ကောင်းကြီးပေး နားညောင်းနေပါပြီ။
ဝန်လေး၍ ပင်ပမ်းသောသူအပေါင်းတို့ ငါ့ထံသို့လာကြလော့ ။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။ ရှင်မသဲ ၁၁း၂၈
တရားဒေသနာ ဟောခြင်း (ဆရာတော် ဆမ်ဆွန်ဒင်)
ဆုတောင်း ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတော်မူပါ။ အာမင်။
ဝန်လေးပင်ပမ်းသူများ ငါ့ထံလာပါ. . ငါသည်ချမ်းသာပေးမယ် . . လို့ သခင်ယေရှုက ပြောတယ်။ ခရစ်ယန်များလည်း ဘုရားအမှု လောကအမှုတွေနဲ့ ပင်ပမ်းကြတာကြည့်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ်။
လောကအရာများကို ရှေ့တန်းတင် . . ''ငါ'' ကို ရှေ့တန်းတင်လို့ ဖြစ်ရတာပါ။ မိမိ ကိုယ်တိုင်လဲ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သမီးနဲ့ စကားများရတယ်။ မင်းလဲ ဝန်လေးပင်ပမ်းသလို ငါလည်း ဝန်လေးပင်ပမ်းတာပဲ ပြောရပါတယ်။ စိတ်ဝန်လေးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှေ့တန်းတင်တဲ့ သမီးအတွက် ဆုတောင်းရပါတယ်။ ဒီတော့မှ ''ငါ'' လည်း ငါ့ကိုငါ ရှေ့တန်းတင်နေတာပါလား ဆိုတာ သိလာရတယ်။ သခင်ယေရှုကို ရှေ့တန်းတင် ယေရှုမေတ္တာနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ . . ဒီနေ့ ဖာရိရှဲ. ကျမ်းတတ်တွေ နောက်လိုက်မလား , ယေရှုနောက် လိုက်မလား ဆိုတာ ဝေငှလိုပါတယ်။
လယ်သူမ ပုံပမာ ရှိပါတယ်။
ပညတ်တရားတွေအရ We shell not ဆိုတဲ့ ပညတ်ချက်ရှိပါတယ်။ လယ်လုပ်လဲ အဦးသီး ပူဇော်ဆပ်ကပ်ရတယ်။ ယာဇ်ပရောဟိတ်ကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းရတယ်။ လယ်မြေတွေအားလုံးက ယာဇ်ပရောဟိတ်တွေ ပိုင်သလို ဖြစ်နေတော့ စိတ်ပျက်ပြီး . .လယ်ကိုရောင်း. . သိုးမွေးမြူရေး အလုပ်ပြောင်းတယ်။ လယ်သူမက သိုးမွေးမြူ လုပ်ငန်း လုပ်ပြန်တော့ We shall not နဲ့ မလွတ်ပြန်ဘူး။ အဦးသီး သိုးဆီဥ တွေ ပေးလှုရပြန်တယ်။ သိုးကျောင်းပြီး ညှက်ရတဲ့ သိုးမွှေးလည်း ယစ်ပရောဟိတ်ကို အရင်ဆက်သရတယ်။ နောက်ဆုံး သိုးမွေးမြူတာ မလုပ်တော့ဘူး. . သိုးကို သတ်ပြီး စားလိုက်တော့ . . သိုးပေါင် လက်အသားကောင်းတွေကို ယာဇ်ပရောဟိတ်ကို ပေးရတယ်။
ဒီလို ဖာရိရှဲကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ရဲ့ ပညတ်တရားကတော့ လိုက်နာလေလေ ဝန်လေးလေလေပါ။
ဝန်ကို ပေါ့စေပါတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ရှေ့ထားပြီး လုပ်ဖို့ပါပဲ။ ယေရှုကို စေ့စေ့ကြည့်ရင် လုပ်သမျှ အလုပ်တွေက ပေါ့ပါးပါတယ်။ လွယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင် မိဘသားသမီး မိတ်ဆွေ ဆွေမျိုး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို မေတ္တာ ထားဖို့ ဆိုတာ မလွယ်ပါ။ မိမိ စွမ်းအား ကြိုးစားမှုနဲ့ လုပ်ရင်တော့ မိမိကိုယ်ကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့ လောကကြီးမှာ ဝန်ထုတ်တွေ လေးလံနေမှာပါပဲ။
ဘုရားသခင်နဲ့သားတော် ယေရှုဟာ တလုံးတဝတည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှု လုပ်ဆောင်ချက်များက ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာတော်က မိမိတို့ အပေါ် အမြဲတမ်း စီးဆင်း ယိုစီး နေတာက အလွန်သေချာပါတယ်။
အဲဒီ ဘုရားရှင် ရဲ့ မေတ္တာကို ခံယူတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
(အချိန်ပေးပြီး တဦးးချင်း .. ၂ယောက် . . အဖွဲ့လိုက် ချီးမွမ်းကြပါ။ စကားချပ်)
ဘုရားသခင် မိမိတို့ကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ တဦးတည်းသော သားတော် ယေရှုကို မိမိတို့ လူသားများရဲ့ အပြစ်အတွက် အသက်ကိုပေးအပ်တဲ့အထိ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကြီမားတာကို ပြပြီးပါပြီ။
ဒီတော့ ယေရှုနောက်လိုက်မယ် ဆိုရင် မိမိရဲ့ မေတ္တာနဲ့ မရပါ။
မေတ္တာရှင် ဆိုတာ ရှိပါတယ်။
ဘုရားသခင် ရဲ့သားတော် သခင်ယေရှု ဆီက လာတဲ့ မေတ္တာကို ခံယူပြီး လောကအလုပ်များ လုပ်ရင်တော့ ဝန်ထုပ်တွေ ပေါ့ပါး ချမ်းသာမယ် ဖြစ်ပါတယ်။